घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू क्यानाडाई फुटबल खेलाडीहरू जोनाथन डेभिड बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो लेखले जोनाथन डेभिडको बाल्यावस्थाको कहानी, बायोग्राफी तथ्यहरू, अर्ली लाइफ, गर्लफ्रेंड तथ्यहरू, व्यक्तिगत जीवन, जीवनशैली, परिवार र अन्य प्रसिद्ध घटनाहरूको बाल्यकालदेखि नै उहाँ परिचित भएदेखि समग्र कभरेज प्रस्तुत गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ फुटबलरलाई "युरोपको अर्को ठूलो चीज" को रूपमा मानिन्छ जहाँसम्म फुटबल (फुटबल) को सम्बन्ध छ। अझ बढि, तथ्य यो हो कि ऊ बनेको सूचीमा प्रवेश गर्ने लेनतर्फ तान्दै छ सबै समयका सर्वश्रेष्ठ क्यानडाई फुटबलरहरू.
यद्यपि, धेरै कम फुटबल प्रशंसकहरूले जोनाथन डेभिडको बायो पढ्ने बारेमा विचार गरेका छन् जुन हामीले तयार गरेका छौं, र यो एकदम रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
जोनाथन डेभिड बचपनको कहानी
सबैभन्दा पहिला, उनका पूरा नाम जोनाथन क्रिश्चियन डेभिड हुन् र उनको उपनाम पनि "क्यानाडाली पर्ल" जोनाथन डेभिड नयाँ मिलेनियमको पहिलो महिना, जनवरी २००० को १ 14 औं दिन, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्रूक्लिन बरोमा जन्मेका थिए। फुटबल भुक्तानी गर्ने बच्चाको आफ्नो बुबाआमाबाट दुई छोरा मध्ये पहिलो छोराको रूपमा जन्म भएको थियो।
जहाँसम्म उनको जन्म मितिको कुरा छ, जवान डेभिड ती थोरै बच्चामध्ये एक थिए जुन पृथ्वीको धरतीमा पर्याप्त अनिश्चितताको समयमा जन्मेका थिए। सत्य यो हो कि क्यानाडाली फुटबल खेलाडी एक भाग्यमानी बच्चा थिए। नयाँ मिलेनियमको सुरुवातमा कुनै प्रविधि अवरोध वा त्यो Y2K, (कुख्यात सहस्राब्दी बग) कहिल्यै देखा परेन। पूर्वानुमान जस्तो मिसिल कहिले दुर्घटना र हवाइजहाजबाट कहिल्यै उड्दैन।
मिलेनियम बग एक टोपी हो किनकि यो काट्न असफल भयो। - बीबीसी
अनुसार खेल-पत्रिका नकजोनाथन डेभिडका अभिभावकहरू उनको जन्म हुनुभन्दा ठीक अगाडि न्यूयोर्कमा परिवार भेट्न आएका थिए। उसको आमा र बुवा सहमत हुनुभयो कि उनका छोरा संयुक्त राज्य अमेरिकामा होस् ताकि परिवारले उहाँ मार्फत नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।
डेभिडको जन्म भएको तीन महीना पछि, उनका बुबाआमा दुवैले महसुस गरे कि अब उनीहरूले राज्यमा बस्नु पर्दैन। परिवार पोर्ट-औ-प्रिन्स, हैतीको लागि प्रस्थान गर्यो।
जोनाथन डेभिड परिवार पृष्ठभूमि
न्यूयोर्कमा जन्मेको र क्यानाडाली राष्ट्रिय टोलीका लागि खेल्दा उसको उत्तर अमेरिकी परिवारको मूल भएको छैन। जोनाथन डेभिडको परिवारको जरा क्यारिबियन देश हाइटीबाट छ।
यदि तपाईं इतिहासमा शार्प हुनुहुन्छ भने सायद तपाईले क्यारेबियन देशलाई दु: खी कारणका लागि सम्झनुहुनेछ। यो जनवरी १२, २०१० को देशको विनाशकारी भूकम्पबाहेक अरू 12,००० व्यक्तिको ज्यान लिएको हो।
जनवरी २०१० को हैती भूकम्प। छवि: टेलिग्राफ
धन्यबाद, जब डेभिडको उमेर6(भूकम्पको ठीक just बर्ष अघि), तिनका आमाबुवा क्यानाडा बसाइँ सर्ने निर्णय गरे। एउटा गरीब देशको परिवारको जरा, न्यु योर्कमा आफ्नो छोरालाई जन्म दिँदै, त्यसोभए सही समयमा उसको लागि उत्तम के हो भनेर जान्नुको अर्थ दुई चीजहरू हुन्।
सबैभन्दा पहिला, जोनाथन डेभिड एक धनी परिवार पृष्ठभूमिबाट आएका हुन सक्छ। दोस्रो, तिनीहरू भाग्यशाली थिए कि विनाशकारी २०१० को भूकम्प अघि years बर्ष अघि हैती छोडेको थियो।
शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
जोनाथन डेभिडको परिवार हैतीबाट बसाइँ सर्दा ओटावा (क्यानाडाको राजधानी शहर) मा बसोबास गरे। सिलिकन भ्याली उत्तरीमा हुर्किएको बच्चा सानो बच्चाको लागि थोरै बोरिंग थियो। जीवन्त पलहरू केवल तब आयो जब ऊ परिवार र / वा स्कूलको साथ थियो।
उनको शिक्षाको सम्बन्धमा, जोनाथन डेभिडका बाबुआमाले उनी लुइस रीयल नामक फ्रान्सोफोन सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गरे, जहाँ उनले फुटबल (फुटबल) प्रति उनको प्रेम विकास गरे।
आईसीआई-रेडियो क्यानाडाका अनुसार, फुटबलरले यस स्कूललाई ​​उनको प्रारम्भिक फुटबल सफलताको कारणको रूपमा उद्धृत गर्‍यो। उनी लुइस रीलमा फुटबल खेल्ने बानी भए।
प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
जोनाथान डेभिडको बचपनको जीवन एकदम फुटबल केन्द्रित थियो। उसको मध्य युगहरूमा पनि, फुटबलरले आफ्नो पेशेवर फुटबल सपनालाई एक पारित कल्पनाको रूपमा कहिल्यै देखेन। स्कूलमा, बृद्ध विद्यार्थीले यसको फुटबल टीमको साथ अनौपचारिक क्यारियर शुरू गर्‍यो।
त्यसबेला, डेभिडको यूरोपमा पेशेवर खेल्ने दृढ अठोट थियो। सुरुदेखि नै, उनी उत्तरी अमेरिकामा खेल्ने कुनै चाहना राख्दैन थिए न त उनी क्यानाडाको फुटबल वा युएस मेजर लीग फुटबल हेर्न चासो राख्दथे। बिरामी केटाका लागि यो कुरा फरक पर्दैन कि उनले कतिपय स्थानीय रूपमा सुरु गरे जब सम्म उनले सपना देख्न छोडेन।
जब समय सहि थियो, युवा फुटबलरले ग्लोस्टर ड्रैगनको साथ स्थानीय स्तरमा नम्र क्यारियर शुरू गरे। त्यसपछि उनी ओटावा ग्लुसेस्टर होर्नेट्स र त्यसपछि ओटावा इन्टरनेसनल २०११ देखि २०१ years बीचमा पुगे।
यति धेरै असफल परीक्षण प्रयासहरू पछि, दाऊदको परिवारको लागि अन्तमा खुशी भयो। उनका बुबाआमा र परिवारका सदस्यहरूको खुसीको सीमा थिएन कि उनीहरूको छोरालाई युरोपका केही टोलीहरूले ट्रायलको लागि आमन्त्रित गरे।
जोनाथन डेभिडको जीवनी- फेम कहानी कहानी
प्रत्येक महत्वाकांक्षी फुटबलरका लागि दुबै आमा बुबा र परिवारका सदस्यहरूलाई अर्को महाद्वीपमा फुटबलको सपना देखाउन छोड्नु अत्यन्त गाह्रो हुन्छ।
तपाईंलाई थाँहा थियो? क्यानाडाई फुटबल खेलाडीले युरोपमा निराशाको स्वाद चाख्यो। डेभिडले उनको पहिलो परीक्षण रेड बुल साल्जबर्ग र स्टटगार्ट दुबै लागि असफल गर्नुभन्दा पहिले त्यो KAA गेन्ट (बेल्जियम फुटबल क्लब) को लागी पारित गर्‍यो।
डे बफेलो (KAA Gent को उपनाम) को साथ जीवन सुरु गर्न सजिलो थिएन। पहिलो प्रशिक्षणको समयमा, डेभिड (उमेर १ 16) लाई जेंटको U21 सँग प्रशिक्षण दिने भनियो। गाह्रो अनुभवको बारेमा बोल्दै, उनले एक पटक भने:
“मैले महसुस गरें कि मैले यस्तो नराम्रो काम गरें कि गेन्टले मद्दत गर्न सकेन तर मलाई छोडिदिए। एक दिउँसो, त्यहाँ दोस्रो प्रशिक्षण थियो र भाग्यले म पुनः प्राप्त गर्न सक्षम भयो।
प्रशिक्षकले मलाई केही विशेष चीज छ भनेर बताउन आउँदा मेरो आत्मविश्वास बढ्यो। ”
जोनाथन डेभिडको जीवनी- फेम कथामा उठ्नुहोस्
युरोपको सब भन्दा ठूलो क्लबको सूचीमा हुने तुलनालाई कुनै मतलब छैन। याद गर्न, युवा डेभिड (उमेर १)) ले क्लब र उसको राष्ट्रिय पक्ष दुवैका लागि धेरै गोल गर्ने रणनीति बनायो।
फुटबलका देवताहरूले क्यानडाली फुटबल स्टारलाई डेब्यू स्कोरिंग स्ट्रीक (पहिलो matches खेलमा sc स्कोर गर्दै) आशिष् दिए जुन गेन्टले उनको करार २०२२ सम्म विस्तार गरे।
बेल्जियम लिगमा (छोटो अवधिको अवधि) 30० गोल गर्ने पक्षमा, उदीयमान स्टारले राष्ट्रिय कर्तव्यको बखत गोलको वर्षा गर्दै आफ्नो सपना पूरा गरे।
के तपाईंलाई थाहा थियो? ... डेभिडले २०१ 2019 मा (१ of वर्षको उमेरमा) तीन व्यक्तिगत सम्मान समात्यो। गोल गोल गर्ने पराक्रमलाई सबै धन्यवाद छ जुन कुनै सीमा थिएन। यी प्रशारणहरूमा समावेश छ:
(i) २०१ C CONCACAF गोल्ड कप गोल्डन बूट पुरस्कार
(ii) २०१ C कोनकाक गोल्ड कप सर्वश्रेष्ठ इलेवन
(iii) २०१२ क्यानाडाई पुरूष प्लेयर अफ द इयर अवार्ड
स्थानान्तरण अटकल जुन उसको उदयलाई चिन्ह लगायो
गेन्टका अध्यक्ष इभान डी विट्टेले फेरि करारमा विस्तार गर्ने निर्णय गरे (२०२ to सम्म) जब उनीहरूले ठूला क्लबहरू शार्कजस्तै घेरिएका देखे।
COVID - १-महामारी पनि स्काउट्सलाई उनको हस्ताक्षर रोक्न पर्याप्त थिएन। कोरोनाभाइरसले बेल्जियम लिग बन्द नगरेसम्म, ब्लाइजिंग डेभिडले १/ गोल र ass सहायक स the्कलन गरेका थिए २०१ the/२०२० सत्रमा।
बेल्जियममा, वर्तमानमा कुनै पनि किशोर किशोरी छैन जसले आफ्नो टीममा जोनाथन डेभिडको रूपमा यस्तै प्रभाव पार्यो। को आविष्कार पछि Alphonso Davies, क्यानाडाई फुटबलर देशको फुटबल उत्पादन को अर्को सुन्दर प्रतिज्ञा साबित भएको छ। बाँकी, हामी भन्छौं, इतिहास हो।
जोनाथन डेभिडको सम्बन्ध जीवन- प्रेमिका, अविवाहित वा विवाहित?
जोनाथन डेभिडको प्रेमिका को हो? स्रोत: खेलकुद न्याक
दुर्भाग्यवस, क्यानाडाई फुटबल अगाडि आफ्नो प्रभावशाली गोल स्कोरिंग क्षमता को लागी समाचार मात्र बनाउँछ। हालसालै त्यहाँ जोनाथान डेभिडको प्रेमिका छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन उत्सुक छ।
वेबको वरिपरि धेरै खोजी गरेपछि हामी यो निष्कर्षमा पुगेका छौं कि जोनाथन डेभिडले (लेख्ने क्रममा) आफ्नो सम्बन्ध जीवनको विवरणहरू नखोजेकोमा सचेत प्रयास गरेका थिए। हुनसक्छ उसको आमाबुबा र सल्लाहकारहरूले यसलाई आफ्नो क्यारियरको लागि धेरै नै प्रारम्भिक मान्दछन्।
जोनाथान डेभिड व्यक्तिगत जीवन
जोनाथान डेभिडको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्ने। एट्रिब्युट: खेल पत्रिका नक
जोनाथन डेभिड को हुन्? क्यानाडाली फुटबल प्लेयर
जोनाथान डेभिडको व्यक्तिगत जीवनलाई टाढाबाट चिन्नेले तपाईंलाई अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्दछ। पहिलो, फुटबलर विश्वास गर्दछ कि यो गोल गोल मात्र होईन तर उसको हृदयलाई असर गर्ने मामिलाहरुमा कोमल भावना राख्नु हो।
सत्य यो हो कि क्यानाडाली हाइटी परिवारको परम्परासँग जोडिएको छ। अझ, जोनाथान डेभिड आफ्नो बाल्यकाल देखि सबै एकल घटना (राम्रो वा नराम्रो) सम्झन सक्षम छन्।
२०१० को विनाशकारी भूकम्पको बेलादेखि नै क्यानाडाली फुटबलरले हाइटीलाई उनको मुटुमै छोडेको छ। डेभिड जोनाथनले एन्टिलिसको पर्लमा खाँचोमा परेका परिवारलाई सहयोग गर्न आफ्नो फुटबल पैसा प्रयोग गर्ने वाचा गरेका छन्।
उसको व्यक्तिगत जीवनमा थप:
क्यानाडाई फुटबलरसँग स्वतन्त्रताको आन्तरिक अवस्था छ, जुन उसको व्यक्तिगत र क्यारियर जीवनमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दछ। युवासँग आफ्नो जीवनको लागि यथार्थपरक योजनाहरू बनाएर, मार्गमा हिंड्ने क्षमता छ।
अन्तमा, डेभिड त्यस्तै व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो बुवा, आमा वा बहिनीलाई शरीर कला (ट्याटू) को प्रतिनिधित्व गर्ने आवश्यकता महसुस गर्दैनन्। धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्दा उनी एक भक्त इसाई हुन् जसले स्कोर गर्दा भगवानको प्रशंसा गर्न हिचकिचाउँदैन।
जोनाथान डेभिड पारिवारिक जीवन चिन्ने
युवा फुटबलर को लागी, उनको परिवार समर्थन हो कि उसले कहिल्यै भुक्तान गर्नुपर्दैन। वर्षा होस् वा चम्किनुहोस्, तिनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए उनको बाटोको प्रत्येक पाइलामा उसलाई समर्थन गर्न।
यो खण्डमा, हामी तपाईलाई जोनाथन डेभिडका आमा बुबा र परिवारका सदस्यहरूका बारे अझ बढी तथ्यहरू ल्याउने छौं।
जोनाथन डेभिडकी आमाको बारेमा
दुःखको कुरा, फुटबल स्वादकी आमा डिसेम्बर २०१ 2019 को शुरुका दिनहरूमा बित्नुभयो। डेभिड क्यानाडा गएका थिए जब उनलाई आफ्नी आमाको स्वास्थ्य द्रुत बिग्रँदै गएको छ भन्ने दुखद खबर आयो।
जसै उनी एक यात्रा (लण्डन स्टपओभर) मा ब्रेक नजिक आए, उनलाई उनको आमाको दुःखको मृत्यु भएको बताइएको थियो। जोनाथन डेभमको अन्त्येष्टि डिसेम्बर १,, २०१ 14 मा गरिएको थियो, उनका काका, बुआ, बुवा, बुवा र अन्य आफन्तहरू उपस्थित थिए।
जोनाथन दाऊदको बुबाको बारेमा
यस फुटबलरका बुबाले हाल डिसेम्बर २०१ around को आसपास आफ्नो प्रिय पत्नी गुमाए पछि एक्लो जीवन बिताउँछन्। स्टारडमको लागि डेभिडको बाटो यति मनमोहक हुने थिएन होला कि बुबाको सहयोगबिना जो उसको सम्पर्कको पहिलो बिन्दुको रूपमा देख्छन् जब कुरा गलत हुन्छ।
जोनाथन डेभिडका भाई बहिनीहरूको बारेमा
क्यानाडाली फुटबलरको एक बहिनी छ जो उसको एउटै मात्र भाईबहिनी हुन जान्छ। जोनाथान डेभिडका बाबुआमाले उनकी बहिनी हाइटी वा क्यानाडामा हुनुपर्दछ भन्ने देखिन्छ किनभने उसले आफ्नो बाल्यावस्थाको अधिकांश समय ती देशहरूमा बसाल्यो।
जोनाथन डेभिडको जीवन शैली तथ्यहरू
जोनाथन डेभिडको जीवन शैली तथ्यहरू। फुटबलर बेल्जियममा नम्र जीवन बिताउँछ।
क्यानाडेली पर्ल गेन्ट, ईस्ट फ्लान्डर्स (बेल्जियम) सहरमा संगठित जीवन बिताउँछन्। जोनाथान डेभिड एक नम्र जीवनशैलीको जीवन बिताउँछन्, जुन तर्कहीन खर्चबाट मुक्त हुँदैन।
जस्तै अन्य युवा फुटबलरहरू जस्तै; इब्राहिमा कोनाटे, Eberechi Eze, आदि, फुटबलर व्यावहारिक आवश्यकताहरुमा समात्छ जुन धेरै खर्च हुँदैन।
नेट वर्थ र तलब
ऊ एक युवा फुटबलर हो भन्ने कुरालाई विचार गर्दै हरेक हप्ता € १€ डलरको ज्याला छ, डेभिड जोनाथनको कुल सम्पत्ति करिब $ १ मिलियन हुन सक्छ भन्नु उचित छ। सोफिफा तथ्या .्कका अनुसार क्यानाडाई फुटबलरले salary 13,००० को वार्षिक तलब पाउँछ।
जोनाथन डेभिड अनटल्ड तथ्यहरू
यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई केहि चीजहरू भन्ने गर्छौं जुन हामी तपाईंलाई शर्त गर्दछौ क्यानाडाली गोल-स्कोरिंग मेशीनको बारेमा तपाईंलाई कहिल्यै थाहा थिएन।
तथ्य # १: सोफीफा उहाँ बारे के भन्छ
जोनाथन डेभिड फिफा तथ्या .्क।
२० बर्षको उमेरमा जोनाथन डेभिड पहिले नै फिफामा चम्किरहेका छन्। उसको सम्भावित मूल्या rating्कनसँगै, उनी मध्ये एक हुने सम्भावना छ विश्वमा १० सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकरहरू.
तथ्य # १: प्लेस्टेशनको लत लगभग उनको क्यारियर बर्बाद
किशोरावस्थाको बाल्यकालमा, डेभिडले यस्तो अवधिको अवलोकन गरे जब प्लेस्टेशनको लतले उसलाई लगभग बिगारेको थियो। यो त्यस्तो बेला आयो जब उसले युरोपियन फुटबल खेल्दै आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा ध्यान दिन आवश्यक थियो।
यो एक आदेश नपुगेको प्रशिक्षक को प्रयास लिन को लागी उसलाई ल्याउन को लाग्यो। आफ्नो आत्मसंयमले उनलाई प्रोत्साहित गरेकोमा धन्यवाद, डेभिडले आफ्नो लत बानी त्यागे।
तथ्य # १: जसलाई ऊ आफ्नो फुटबल आइडलको रूपमा पूजा गर्दछ
विश्वभरि, धेरै युवा फुटबल खेलाडीहरू उनीहरूको मूर्तिहरूको रूपमा सबैभन्दा उत्तम देखिन्छन् - यसमा मनपर्नेहरू समावेश छन् क्रिस्नोनो रोनाल्डो, लिओनेल मेस्सी आदि। एक बढ्दो फुटबलरको रूपमा, डेभिडलाई रोल मोडेल वा फुटबलको मूर्ति फेला पार्न गाह्रो थिएन।
उनको फुटबल मूर्तिको सम्बन्धमा, तपाईं सुपरस्टारको मनपर्दो बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ जुन माथि उल्लेख गरिएको छ। जे होस्, यो तपाईलाई छक्क पर्नेछ कि जोनाथन डेभिडको मिing मात्र आउँदछ डवेन डे रोजारियो, क्यानडाको शीर्ष गोल स्कोरर।
म शर्त गर्दछु कि तपाईंले कहिले पनि आफ्नो मूर्तिलाई अनुमान लगाउनुहुने छैन। छवि: NBC, एक्सप्रेस र miSoccer।
तथ्य # १: गति तथ्य
तपाईंलाई थाहा छ? क्यानाडाली (२० वर्षको उमेरमा )को गती छ जुन प्रति घण्टा 20 33 किलोमिटरसम्म पुग्छ। न्याय गर्दा, जे भए पनि, उसले आफ्नो द्रुत व्यापार लिइरहेको छ, हामीलाई निश्चय छ कि जोनाथन डेविड कुनै समय बीचमा क्रमबद्ध हुँदैन को विश्वका शीर्ष fas सब भन्दा तेज खेलाडीहरू.
तलको भिडियोले तपाईंलाई कारणहरू प्रदान गर्दछ किन धेरै शीर्ष यूरोपीयन क्लबहरूले उहाँको हस्ताक्षरको लागि माग्दै छन्।
जोनाथन डेभिड मा यो लेख पढ्न को लागी धन्यवाद। LifeBogger हाम्रो दैनिक तालिकामा शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्दछ बाल्यकालका कथाहरू र जीवनी तथ्यहरु। यस लेखमा ठिकै नदेखिने चीज हेर्नुहोस्, कृपया तपाइँको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.